Shot Blasting Machine yeSimbi Pipe Outer Wall Kuchenesa
1. Tsanangudzo yekugadzira
Muchina uyu unoshanda kune simbi chubhu uye pombi zvigadzirwa kubata nemukati nekunze pamusoro, bvisa iyo oxide welding slag, uye zvimwe zvinhu zvakasiyana, zvichiratidza simbi inopenya.
Bvisa kushushikana kwemukati, wedzera chidimbu chebasa kuneta kuramba, kuvandudza anti-kuneta zvimiro zvechigamba chebasa.
Iyo chidimbu chebasa chekuwedzera iyo firimu adhesion paunenge uchipenda, uye pakupedzisira kuvandudza kunaka kwepamusoro uye mukati chinangwa.
Pfuti panguva imwe chete masangano ekushanda ane chinangwa chekuwedzera chekuchenesa, chinangwa chakachena zvachose.
Shandisa: Iyi yakatevedzana yekuchenesa muchina inoshanda kune akasiyana madhayamita simbi chubhu surkuchenesa kumeso, kushandiswa zvakanyanya mukati
petrochemical engineering, simbi, kupisa kwedunhu, indust yemvurarial uye zvichingodaro.
- Yekuchenesa kunze kwemadziro esimbi mapaipi nemachubhu.
- Floor yakaiswa "BE" air wash separator kuitira nyore kutarisa uye kugadzirisa.
- Iyo blast compartment uye pasi zvinoumbwa nemanganese plating kuti ive nechokwadi chehupenyu hurefu.
-Yakazara otomatiki dhizaini yekupa yakakwira vhoriyamu kugadzirwa uye mutengo unoshanda kuita.
3.KUTAURWA KWESTEEL PIPE SHOT BLASTING MACHINE:
Model Saizi yekuchenesa (mm) Kumhanyisa kumhanya (m/min)
QGW100 50-300 2-10 Mukati madziro epfuti inoputika muchina
QGN100 50-300 1-4 Madziro ekunze emuchina wekuputisa pfuti
4. Chimiro chechimiro
Muchina uyu wakakosha kudzoreredza simbi jecha blasting muchina, uyo unosanganisira Blasting chamber, Blasting wheel assembly, Roller conveyor, Abrasive recycling system (Screw conveyor, Elevator, Separator), Dust yekubvisa system, Magetsi control system, nezvimwe.
Shot blasting chamber shells anotora mbiri simbi uye simbi ndiro welding chimiro, yakasimba, yakasimwa, yakapamhama yekuvhiya nzvimbo yekupfura kuputika kwechidimbu chebasa.Shot blasting room inogadzirwa nekamuri body shell, gedhi, madziro akatenderedza, lateral wall, denga mushure, guard board etc.
Blast wheel assembly inogadzirwa ne blast wheel shell, motor, importing chubhu, shizha, impeller, directional set yemapiritsi, point wheel, block sand plate, guard board nezvimwe zvinosiya, guard board, etc ese anopfeka maparts achishandisa 20 % high-chromium cast iron.
Batanidza Screw conveyor, Bucket elevator, Separator, abrasive kuchengetedza uye mayuniti ekupa.
Kubvisa guruva hurongwa
Muchina uyu unotora Cartridge kana Bhegi rudzi rwekuunganidza guruva, mweya wakapera wakagadzirwa panguva yekushanda.Kushanda kwe dedusting kunosvika 99.6%, hupfu density iri pasi pe100mg/m3, yakanyanya kuomarara kupfuura chiyero chenyika.
Seta kupfura bhora rekutenderera kutadza alarm basa, kana chero zvikamu zve system zvikatadza, zviri pamusoro apa zvinomira kushanda, kudzivirira bhora rekupfura rakanamira uye kupisa mudziyo wemagetsi.
A. Mainjiniya edu anogona kushanda zvakasiyana maererano nezvinodiwa zvekugadzirwa kwevatengi vemidziyo.uye tumira chisimbiso chemutengi kubatsira vatengi kuchengetedza mari.
B.Panguva yekugadzirwa kwemidziyo, tinofotokodzera kufambira mberi kwekugadzirwa kwechigadzirwa, uye tinotumira kumutengi kuti aone kufambira mberi.
C. Mvere dzenhumbi dzinoenda, tichatumira zvinyorwa zvepakutanga zvemutengi (zvakadai serongedzero yekutakura, bhiri, CO, Form E, Form A, Form F, Form M, B/L etc.)
D. Tinogona kupa vatengi mahara echiRungu nheyo yekudhirowa, kudhirowa kwekuisa, zvinyorwa, zvinyorwa zvekugadzirisa uye zvikamu zvekudhirowa.
E. Tinogona kutumira mainjiniya edu kukuisa uye kugadzirisa mhiri kwemakungwa, uye kudzidziswa kwemahara kwevashandisi nevashandi vekugadzirisa.
A. Mazuva mangani aunoda kugadzira muchina uyu?
B. Fekitari yako inoitei maererano nekutonga kwemhando?
C. Chii muchina wako kunaka vimbiso?
D. Unokwanisa here kupa kugadzwa uye kutumira mhiri kwemakungwa?Zvichatora nguva yakareba sei?
E. Ndingavimba sei newe kuti uendese muchina wakakodzera sezvandakaraira?
Tichanyatso endesa yakanaka mhando muchina sezvatakakurukura uye nekusimbisa muhurongwa.Maitiro ekugadzira uye kutumira isu tichatora mafoto totumira kwauri.
Isu takagadzira muna 2012, inofukidza nzvimbo inoda kusvika 17000square.
Isu tinotarisa pane akasiyana akateedzana akateedzera kuputika muchina, jecha midziyo yekukanda, muchina wekuvaka, muchina wekutsvagira uye kumwe kutsvagisa kwemaindasitiri nekusimudzira.
Iyo kambani yakapfuura ISO9001, CE uye BV certification.
Tine vatengi vakawanda muChina, USA, EUROPEA, dzimwe nyika dzeAsain, India, South Africa, Tanzania, Nepal, uye vamiririri vakavamba.
Isu tinotarisira nemoyo wese kushamwaridzana newe uye iwe kambani.
Zvakapfuura: Q37 akatevedzana simbi maindasitiri Hook mhando kupfura kuputika muchina mutengo
Zvinotevera: Kuburikidza nemhando yesimbi yekupfura muchina / simbi ndiro yekupfura inoputika muchina wakagadzirwa kuChina
Horizontal Bhandi Rinoenderera mberi Wire Mesh Bhandi rinofambisa...
Rubber Belt Shot Blasting Machine, Hook Polisher Abrator, abrator, Rubber Belt Type Shot Blasting Machine, Kaviri Hook Abrator, Kuburikidza neFeed Shot Blasting Machine, Zvese Zvigadzirwa